Ny zavatra rehetra mila ho fantatrao momba ny Nicotinamide Riboside Chloride
Karazan-tsakafo ho an'ny orinasa sy orinasa
Home > Ny zavatra rehetra mila ho fantatrao momba ny Nicotinamide Riboside Chloride
Janoary 22, 2021
Raha mitady Nicotinamide mpihinan-kena ianao Chloride Riboside fanampiana, izahay dia manome soso-kevitra ny fanampiana Cofttek Nicotinamide Riboside. Ny orinasa mpamokatra entana dia tsy mifampiraharaha afa-tsy amin'ny fanampin-tsakafo Nicotinamide Riboside ary noho izany dia afaka matoky izy ireo fa ny suplementaire noforonin'ny orinasa dia tena avo lenta. ny Cofttek Ny famenon-tsakafo Nicotinamide Riboside dia misy kapsily mora ampiasaina, izay mora atelina tokoa. Ny kapila dia takiana amin'ny mpampiasa afa-tsy kapoaka iray isan'andro
Na izany aza, raha mitady gluten, atody, BPA, voanjo, preservatives ary vokatra tsy misy ronono ianao, dia ampirisihinay hametraka ny volanao ao amin'ny famenon'ny Cofttek Nicotinamide Riboside. Ity famenon-tsakafo ity dia mampifangaro ny NR amin'ny flavonoids. Miara-manatsara ny hetsika sirtuin ireto roa ireto. Ny tena zava-dehibe dia nilaza i Cofttek fa manao andrana efatra amin'ny famenony tsirairay avy izy ary azo antoka tsara ny famenon'ilay orinasa. Ankoatr'izay, ireo famenon-tsakafo ireo dia novokarina tamina tranokala voamarina cGMP sy toerana fanamarinana TGA
Nicotinamide Riboside Chloride FAQ
Inona no atao hoe klôrozida nikôtinamidia?
Nicotinamide Riboside Chloride na Niagen dia endrika kristaly an'i Nicotinamide Riboside, izay otrikaina NAD +. Raha mizaha 255.25 g / mol ny Nicotinamide Riboside, ny Nicotinamide Riboside Chloride dia milanja 290.70 g / mol ary 100 mg ny Nicotinamide Riboside Chloride dia manome 88 mg ny Nicotinamide Riboside. NR dia heverina ho azo ampiasaina amin'ny sakafo.
Na dia Nicotinamide Riboside dia endrika Vitamina B3, ny fananany isan-karazany dia mahatonga azy tsy hitovy amin'ny mpikambana hafa ao amin'ny vondrona vitamin B3, toy ny nicotinamide sy niacin. Raha i Niacin dia mahatonga ny hoditra hibontsina amin'ny alàlan'ny fampandehanana ilay receptor G-G protein-proteinina GPR109A, ny Nicotinamide Riboside dia tsy mamaly mihitsy an'ity receptor ity ary noho izany dia tsy miteraka fikosoham-bolo akory, na dia laniana amina fatra 2000 mg isan'andro aza. Ankoatr'izay, ny andrana natao tamin'ny totozy dia nanambara fa ny Nicotinamide Riboside no mpialoha lalana NAD + izay nitarika ny fiakarana avo indrindra amin'ny Nicotinamide Adenine Dinucleotide na NAD + ao anatin'ny vatana.
Ny Nicotinamide Riboside dia mandeha ho azy amin'ny sakafo maha-olona ary indray mandeha ao anaty vatana dia miova amin'ny NAD +, izay ilain'ny vatana amin'ny asa isan-karazany. Ohatra, ny fikarohana siantifika dia nanaporofo fa ny Nicotinamide Riboside Chloride na NAD + izay nomen'ny NR dia manatsara ny fiasa mitochondrial ary koa ny fahatsapana insuline amin'ny alàlan'ny famelana ny fianakavian'ny sirtuin amin'ny fiadiana amin'ny atidoha, izay tompon'andraikitra amin'ny fametrahana ny metabolism oxidative ao anaty vatana.
Nahoana isika no mila Nicotinamide Riboside Chloride
Ny indostrian'ny tarehy dia indostrialy miliara dolara, indrindra satria ny olombelona dia variana amin'ny fisehoany. Io koa no antony lehibe mahatonga ny fikarohana manodidina ny akora fanoherana ny fahanterana ary ny vokatra dia nahavita fandrosoana mahatalanjona tao anatin'ny fotoana fohy. Ireo konglomerat manerantany dia mahatakatra fa misy vola azo avy amin'ny fanirian'ny olona hijanona ho tanora lalandava ary amin'izany dia manana ekipa napetraka, mandany andro sy herinandro maro hahitana akora sy vokatra izay afaka mampitombo ny fihavanan'ny hoditra. Nicotinamide Riboside na Niagen dia hita vokatr'ity fikarohana tsy miato ny vokatra anti-antitra ity. Raha ny ankamaroan'ny vokatra manohitra ny fahanterana dia mampihena ny famantarana ny fahanterana amin'ny hoditra, Niagen kosa dia mampihena ny famantarana ny fahanterana ao anatin'ny vatana. Ny Nicotinamide Riboside na Niagen dia endrika kristaly an'ny Nicotinamide Riboside Chloride ary rehefa ao anaty ny vatana dia mivadika ho NAD + izy io, izay tompon'andraikitra amin'ny fahanterana ara-pahasalamana ary koa ireo asa lehibe hafa.
Azo antoka ve i Nicotinamide Riboside Chloride?
Ny fandalinana marobe natao hatreto dia nahita ny fihinana Nicotinamide Riboside tao anatin'ny 1000 ka hatramin'ny 2000 mg isan'andro azo antoka ho an'ny fampiasana olombelona. Na izany aza, satria ilaina ny fikarohana mivaingana kokoa amin'ity faritra ity, ny mpanamboatra Nicotinamide Riboside dia manoro hevitra ny fitazonana ny fihinanana NR isan'andro eo ambanin'ny 250-300 mg isan'andro.
Na dia azo antoka aza ny fihinana Nicotinamide Riboside na Nicotinamide Riboside Chloride, dia mety hiteraka voka-dratsy toy ny maloiloy, aretin'andoha, tsy fihinanan-kanina, havizanana ary fivalanana. Raha mahatsapa ny iray amin'ireo soritr'aretina ireo ianao rehefa mandray fanampim-panazavana NR, manatona avy hatrany ny dokotera. Ankoatr'izay, satria tsy ampy ny porofo momba ny vokatry ny Nicotinamide Riboside amin'ny vehivavy bevohoka sy mampinono, ity vondrona ity dia tokony hiala amin'ny fampiasana fanafody Nicotinamide Riboside.
Afaka mamerina ny fahanterana ve?
Fa ny fandalinana natao tato ho ato dia nampiseho fa ny fitomboan'ny NAD + ao amin'ny vatana dia afaka mamerina amin'ny laoniny ny fiasan'ny sela ho toy ny hoe miverina ny fotoana - tena mampihena ny fizotry ny fahanterana. Amin'ny ankapobeny, ny lehilahy dia afaka mamadika ny fahanterana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haavon'ny salama NAD +.
Ohatrinona ny vidin'ny fitsaboana NAD?
Ohatrinona ny vidin'ny NAD +? Ny infusions NAD + dia manomboka amin'ny $ 749 ary azo amboarina mba hampidirina ireo akora avy amin'ny Cocktail MIVM. Ny Cocktail Mobile IV Medics NAD + MIVM dia $ 999 ary ity fitsaboana lafo vidy ity dia misy vitamina sy otrikaina fanampiny toy ny: magnesium.
Manatsara ny hoditra ve i Nad?
Nanaiky toy izao ny mpanolotsaina iray amin'ny magazain'ny C&T: "Zava-dehibe amin'ny metabolisma sela ny NAD +, ary miditra amin'ny indostria kosmetika izy io ho toy ny fomba fampitomboana ny angovo sela. Ny eritreritra dia, raha mampitombo ny herin'ny hoditra sela hoditra mihantitra ianao dia hiasa bebe kokoa toy ny sela hoditra tanora ary hamokatra hoditra tsara kokoa.
Mahatonga anao ho tanora kokoa ve i Nmn?
Hoy izy: "Nasehon'ny laboratoara anay fa ny fanomezana NMN totozy maherin'ny 12 volana dia mampiseho vokatra manohitra ny fahanterana." Raha ny filazan'i Imai, ny fandikana ny valiny amin'ny olombelona dia midika fa ny NMN dia afaka manome metabolisma olona 10 ka hatramin'ny 20 taona latsaka.
Vitaminina B3 ve i nad?
Inona ny atao hoe Nikotinamide Riboside? Ny Nicotinamide riboside, na niagen, dia endrika vitaminina B3 hafa, izay antsoina koa hoe niacin. Toy ny endrika vitamina B3 hafa, ny ribotide nikotinamide dia navadiky ny vatanao ho lasa nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +), molekiola coenzyme na mpanampy.
Mitovy amin'ny Vitamina B3 ve ny nicotinamide?
Niacin (fantatra koa amin'ny hoe vitamina B3) dia iray amin'ireo vitamina B tsy voavahan-drano. Niacin dia anarana mahazatra an'ny asidra nikotinika (asidra pyridine-3-carboxylic), nicotinamide (niacinamide na pyridine-3-carboxamide), ary ireo derivatives mifandraika amin'izany, toy ny ribotide nikotinamide.
Afaka mampiasa niacinamide isan'andro ve aho?
Satria zakan'ny ankamaroan'ny olona izy io, ny niacinamide dia azo ampiasaina indroa isan'andro isan'andro. Izy io dia miasa amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona, na dia mora ampiasaina amin'ny ririnina aza izy io mandritra ny hatsiaka sy ny andro maina ary ny fampiasana ny fanafanana afovoany matetika. Ampiasao izany amin'ny fihazakazahana alohan'ny hanombohana ny fitsaboana retinol anao ary miaraka aminy koa.
Ny niacinamide ve dia mitombo ny volon'ny tarehy?
Niacinamide dia manana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny volo lava sy matanjaka noho ny fihodinan'ny toetrany. Manatsara ny fisehoana sy ny fahatsapana ny volo, amin'ny fampitomboana ny vatana, ny fahamendrehana ary ny famirapiratana. Izy io koa dia manatsara ny volon'ny volo izay simba ara-batana / simika amin'ny fanampiana amin'ny fananganana Keratin.
Iza no niacinamide na vitamin C tsara kokoa?
Fanampin'izany, "amin'ny ankapobeny, ny vitamina C dia mila ampiasaina amin'ny pH ambany mba hahomby, raha ny niacinamide kosa dia miasa tsara kokoa amin'ny pH avo / tsy miandany," hoy i Romanowski. (Ny maha-fussy azy dia ny antony mahatonga ny vokatra vitamina C miolikolika amin'ny lafin'ny pricier; singa sarotra ny mandrafitra azy.)
Ratsy ho an'ny aty ve ny niacin?
Niacin dia mety hiteraka fihenan'ny serum aminotransferase serum maivana sy mavesatra ary ny famolavolana ny niacin dia mifandray amin'ny ratra amin'ny ati-doha, izay mety ho mafy ary koa mahafaty.
Tsara amin'ny hoditra ve ny nikotinamid?
Niacinamide dia mampihena ny fivontosana, izay mety hanamaivana ny mena noho ny eczema, mony ary ny hoditra hafa. Mampihena ny fisehoan'ny pore. Ny fitazonana ny hoditra ho malama sy hamandoana dia mety hanana tombony faharoa - fihenana voajanahary amin'ny haben'ny pore rehefa mandeha ny fotoana.
Be loatra ve ny niacinamide 10%?
Niacinamide dia mety hanatsara ny endrikao amin'ny hoditrao amin'ny fikarakarana fahasimban'ny masoandro, fisorohana ny fahatapahana ary fanatsarana ny tsipika sy kentrona tsara. Ny fifantohan'ny vokatra niacinamide topical dia hatramin'ny 10%, fa ny fandinihana dia nampiseho vokany ambany hatramin'ny 2%.
Mandra-pahoviana ny fiasan'ny nicotinamide?
Maharitra hafiriana vao hiasa niacinamide? Ho hitanao eo ny vokany eo noho eo na dia naneho vokatra aza ny ankamaroan'ny fandinihana ny niacinamide aorian'ny herinandro 8-12. Mitadiava vokatra misy niacinamide 5%. Izany no isan-jato noporofoina fa hita fa manisy tsy fitoviana nefa tsy miteraka fahasosorana.
Manala ny fery amin'ny mony ve ny niacinamide?
Niacinamide dia afaka manatsara ny hetsika melanosome ao anaty sela, izay afaka manatsara ny hyperpigmentation sisa tavela amin'ny holatra mony ary koa ireo izay voan'ny melasma.
Inona no ataon'ny vitamina B5 amin'ny hoditrao?
Pro-Vitamin B5 dia manampy amin'ny fihazonana ny hoditra ho malefaka sy malefaka ary ho salama hatrany. Izy io koa dia misy fiantraikany manohitra ny inflammatoire izay afaka manampy amin'ny fampiroboroboana ny fizotran'ny hoditrao. Mahavitrika lalina, manampy amin'ny famonoana ny hoditra amin'ny alàlan'ny fifohana ny hamandoana avy amin'ny rivotra (hendry!).
Ahoana no hampitomboako ny NAD voajanahary?
Mametra ny fiposahan'ny masoandro
Mitadiava ny hafanana
Sakafo fifadian-kanina sy ketosis
Azonao atao ve ny mandray am-bava an'i NAD?
Vokatr'izany, ny famenony NAD am-bava dia tsy dia misy vokany firy noho ny infusions IV satria ambany ny tahan'ny fandraisana azy ireo. Zava-dehibe ny manamarika fa ny fanampiana am-bava dia tena azo antoka; tsy atahorana ho voan'ny aretina ianao raha mety amin'ny fitsaboana IV.
Maharitra hafiriana i Nad miasa?
Ny drafi-tsakafo dia mety ahitana sakafo be vitamina hampiroborobo ny dopamine ary afaka mamokatra NAD ao amin'ny ati-doha. Ny ankamaroan'ny marary dia mila fampidirana 6 na 10 andro eo ho eo mba hahatsapana ny vokany.
Milamina ve i Elysium?
Soso-kevitra amin'ny fampiasana maharitra, milaza fa ny hetsika fampiroboroboana ny NAD dia azo tazonina ihany raha toa ka manohy mampiasa ity vokatra ity ny mpanjifa. Basin'ny fahasalamana Elysium. Ho famenony, ny Basis dia heverina ho azo antoka hohanin'ny olombelona.
Inona ny fanoherana ny fahanteran'ny NAD?
Ny Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) dia cofactor ilaina amin'ny sela velona rehetra izay tafiditra amin'ny fizotry ny biolojika fototra. … Ny porofo misongadina dia manondro fa ny fiakaran'ny haavon'ny NAD + dia mety hampiadana na hamadika ny lafiny fahanterana ary hampihemotra ny fivoaran'ny aretina mifandray amin'ny taona.
Inona avy ireo vokatry ny nikotinamide riboside?
Amin'ny fandinihana ataon'ny olombelona, ​​ny fihinanana 1,000-2,000 mg isan'andro dia tsy nisy vokany ratsy.
Ny olona sasany dia nilaza fa misy vokany maivana sy antonony, toy ny maloiloy, havizanana, aretin'andoha, fivalanana, tsy mahazo aina amin'ny vavony ary tsy mahasalama.
Inona no maha samy hafa ny ribotide nikotinamide sy ny mononucleotide nicotinamide? (2)
Ny fahasamihafana lehibe indrindra sy miharihary indrindra eo amin'ny NMN sy ny NR dia ny habeny. Ny NMN dia lehibe kokoa noho ny NR, midika izany fa matetika dia mila vaky izy mba hiditra ao amin'ilay sela. Ny NR, raha oharina amin'ireo mpialoha lalana NAD + hafa (toy ny asidra nikotinidika na nikotinamid) dia manjaka amin'ny fahombiazana.
Mitovy amin'ny Nmn ve ny nicotinamide?
Ny Nicotinamide riboside sy NMN dia mitovy amin'ny simika, afa-tsy vondrona phosfate iray izay eo amin'ny NMN. Ny fandinihana dia naneho fa ity vondrona phosphate fanampiny ity dia mitaky ny NMN fanampiny hamadika voalohany ho lasa ribotide nicotinamide alohan'ny hidirany ao amin'ilay sela.
Manampy amin'ny torimaso ve i Nad?
Ny haavon'ny NAD + dia manana fifandraisana matanjaka amin'ny tsingerin'ny torimaso sy ny aretina mifandraika amin'ny taona. Tsy nisy porofo mivantana nanaporofo fa ny NAD + dia miasa ho ivon'ny fihodinan'ny torimaso sy ny aretina mifandraika amin'ny taona.
Inona no ataon'ny Tru Niagen ho an'ny vatana?
Inona ny atao hoe Tru Niagen? Tru Niagen, avy amin'i ChromaDex, dia vokatra angovo salama izay mety hanampy anao hanoherana ny fahanterana amin'ny alàlan'ny famelomana indray ny fitomboan'ny sela sy ny fanamboarany. Manao izany amin'ny fampiakarana ny haavon'ny NAD anao. Mampiseho ny fikarohana fa ny NAD dia manampy ny vatanao hanova ny otrikaina sy ny sakafo ho lasa angovo, mampitombo ny metabolisma.
Iza no tsara kokoa Nmn sa NAD?
Ny NMN dia lehibe kokoa noho ny NR, midika izany fa matetika dia mila vaky izy mba hiditra ao amin'ilay sela. Ny NR, raha oharina amin'ireo mpialoha lalana NAD + hafa (toy ny asidra nikotinidika na nikotinamid) dia manjaka amin'ny fahombiazana. Saingy omeo varavarana vaovao i NMN, varavarana iray ahafahany miditra, ary lalao vaovao io.
Miasa ve ny fanafody famenony?
Asehon'ny fanadihadiana fa ny fanamafisana ny haavon'ny NAD + dia afaka manitatra ny androm-piainan'ny masirasira, kankana ary totozy. Ny fikarohana biby dia manondro ny fampanantenan'ny NAD + hanatsara ny lafiny fahasalamana maro. Ny fampiakarana ny haavon'ny molekiola ao amin'ny totozy taloha dia toa mamelombelona ny mitochondria - ireo ozinina misy angovo ao anaty sela, izay mihalavo rehefa mandeha ny fotoana.
Inona no ao amin'ny fitsaboana Nad IV?
Iray amin'ireo fitsaboana holistic farany indrindra amin'ny sehatry ny fanarenana ny fiankinan-doha dia fitsaboana asidra amine, fantatra amin'ny anarana hoe fitsaboana NAD IV. Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD) dia co-enzyme metabolika ary voampanga ho manana andraikitra lehibe amin'ny famolavolana, fanamboarana ary fanavaozana ny sela tsirairay ao amin'ny vatana.
Inona avy ireo mpanentana ny NAD?
Ny mpanentana ny NAD dia famenon-tsakafo misy riboside nikotinamide, karazana vitamina B3. Rehefa raisina ho toy ny famenony, ny vatana dia mamadika riboside nikotinamide ho lasa nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +). NAD + dia coenzyme voarohirohy amin'ny fizotran'ny sela maro. Rehefa mihantitra isika dia mihena ny haavon'ny NAD + amin'ny vatantsika.
Inona no mahasamihafa ny NADH sy ny NAD +?
Mba hanatanterahana ny asany amin'ny maha mpitatitra elektronika azy, ny NAD dia miverina miverina eo anelanelan'ny endrika roa, NAD + sy NADH. NAD + dia manaiky elektrôna avy amin'ny molekiola sakafo, manova azy ho NADH. Ny NADH dia manome elektron ho an'ny ôksizenina ary mamadika azy ho lasa NAD +.
Iza no tsara kokoa NAD sa NMN?
Ny NMN dia lehibe kokoa noho ny NR, midika izany fa matetika dia mila vaky izy mba hiditra ao amin'ilay sela. Ny NR, raha oharina amin'ireo mpialoha lalana NAD + hafa (toy ny asidra nikotinidika na nikotinamid) dia manjaka amin'ny fahombiazana. … NR, na izany aza, dia naseho fa niditra sela ao amin'ny atiny, hozatra ary hozatry ny totozy modely.
Inona avy ireo sakafo misy riboside nikotinamid?
Ny ronono Dairy
Atsaharo ny zava-pisotro misy alikaola
Inona avy ireo sakafo be nikotinamide?
Misy endrika vitamina B3 roa. Ny endrika iray dia niacin, ny iray hafa dia niacinamide. Niacinamide dia hita amin'ny sakafo maro, anisan'izany ny masirasira, hena, trondro, ronono, atody, legioma maitso, tsaramaso, ary voamadinika. Ny Niacinamide dia hita ihany koa amin'ny famenon-tsampona vitamina B marobe miaraka amin'ny vitamina B hafa.
Inona no ataon'ny nicotinamide amin'ny hoditra?
Ny Nicotinamide ampiasaina ho fanafody dia mety hahasoa ny hoditra amin'ny fomba maro samihafa. Ny Nicotinamide dia manana toetra manohitra ny inflammatoire, izay azo ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina mahery vaika (mibontsina). Mety hanatsara ny mony amin'ny alàlan'ny hetsika fanoherana ny inflammatoire ary amin'ny alàlan'ny fampihenana sebum.
Ny niacin dia tsara amin'ny famoizam-po?
Araka ny fijoroana vavolombelona an-tserasera, ireo olona manana fahaketrahana mafy izay mamaly ny fitsaboana niacin dia mahazo tombony amin'ny fatra avo kokoa, manomboka amin'ny 1,000 ka hatramin'ny 3,000 mg. Araka ny rakitsary fanadihadiana momba ny sakafo tamin'ny 2008, Food Matters, nisy vehivavy iray nahita ny soritr'aretin'ny fahaketrahany namadika tamin'ny fatra 11,500 XNUMX mg isan'andro.
Inona avy ireo soritr'aretin'ny tsy fahampian'ny vitamina B3?
Ny soritr'aretin'ny tsy fahampian'ny vitamina B3 dia misy ny harerahana, tsy fihinanan-kanina, maloiloy, mandoa, aretim-pivalanana, fery am-bava, lela mena mamirapiratra mamaivay, mivezivezy ary miaina toe-po. Ny hoditra vakivaky volo izay mora tohina amin'ny masoandro dia famantarana iray hafa amin'ny tsy fahampian'ny vitamina B3.
Mampitombo ny NAD ve ny fanatanjahan-tena?
Ho an'ny roa, ny NAD dia takiana hahena ho NADH amin'ny tsiranoka asidra tricarboxylic, hampitombo ny famokarana ATP amin'ny alàlan'ny rojom-pitaterana elektronika. Eny tokoa, na ny haavon'ny NAD na ny fanehoana anzima famonjena NAD amin'ny hozatra dia naseho nitombo nandritra ny fampihetseham-batana.
Ny nicotinamide ve dia vitamina B3?
Ny Nicotinamide, fantatra koa amin'ny anarana hoe niacinamide, dia endrika amide-molide amide izay niacin na vitamin B3. Izy io dia hita amin'ny sakafo toy ny trondro, akoho amam-borona, atody, ary voamadinika. Izy io koa dia amidy ho toy ny famenon-tsakafo, ary toy ny niacin tsy misy flushing.
Mampitombo ny haavon'ny NAD + ve ny niacin?
mitatitra fa ny niacin, vitamina B3, dia afaka mamonjy amin'ny fomba mahomby ny haavon'ny NAD + amin'ny hozatra sy ràn'ireo marary manana myopathie mitochondrial, manatsara ny fambara aretina ary ny tanjaka hozatra Ny haavon'ny NAD + dia nitombo ihany koa tamin'ny lohahevitra mahasalama. Ny porofo dia manondro fa ny niacin dia mpanentana NAD + mahomby amin'ny olombelona.
Ahoana no fandraisanao ny NAD +?
Ho fampiroboroboana NAD + dia makà takelaka sublingual NADH 5 mg. Mba hisorohana ny lag jet, makà NADH 20 mg. Mba hahatratrarana ny haavon'ny NAD + tsara indrindra dia mahazo IV ß-Nicotinamide adenine dinucleotide infusion isan-kerinandro na isam-bolana.
Inona ireo sirtuins 7?
Ireo "fahotana" ireo dia mandray anjara amin'ny fepetra mahafaty fito izay mitombo ny fihanaky ny fahanterana (matavy loatra, karazana 2 diabeta, aretim-po, aretim-po, homamiadana, dementia, aretin-tratra ary osteoporose). Ny sirtuins dia kilasy deacetylases miankina amin'ny NAD + misy mpikambana fito amin'ny olona sy biby mampinono hafa.
Ahoana ny fomba hanatsarana ny sirionako?
Anisan'ny paikady hisorohana na hiadiana amin'ny aretina toy izany ny fanatanjahan-tena. Ny fanatanjahan-tena dia misy fiantraikany tsara amin'ny hetsika sy / na ny fanehoana sirtuins, miteraka fahombiazan'ny metabolisma oksidana tsara kokoa, fampitomboana ny biogenesis sy ny mitochondrial, ary koa ny fikojakojana ny rafitra antioxidant.
Rahoviana aho no tokony handray an'i Niagen?
Ny kapsily dia azo vidiana amin'ny fisondrotana 1 volana, 3 volana na 6 volana. Ny orinasa dia manoro hevitra ny mpanjifa mba handray 2 amin'ny kapsily 150 mg isan'andro miaraka na tsy misy sakafo. Ny kapsula dia azo alaina amin'ny maraina na amin'ny alina ary miaraka na tsy misy sakafo.
Maharitra hafiriana vao miasa ny TRU Niagen?
Ny fanadihadiana ara-pahasalamana novatsian'ny ChromaDex dia mampiseho fa ny NR dia manampy amin'ny fomba azo antoka sy mampitombo ny NAD ao anaty lalan-dra aorian'ny 6-8 herinandro. Tru Niagen dia nilaza manokana fa ny olona mandray 300 mg isan'andro isan'andro amin'ny famenon-tsakafo mandritra ny valo herinandro dia nampitombo ny 40-50% ny NAD.
Amin'ny firy andro aho no tokony handray an'i Tru Niagen?
Ny Tru Niagen dia asaina raisina amin'ny fotoana mitovy isan'andro. Azonao atao ny mandray azy indray mandeha isan'andro amin'ny maraina na amin'ny alina, miaraka amin'ny sakafo na tsy misy.
Inona avy ireo akora ao amin'ny Tru Niagen?
TRU NIAGEN dia misy ribotide nicotinamide izay tsy mitovy amin'ny loharano vitamina B3 hita amin'ny vokatra multivitamin. TRU NIAGEN dia tototry ny sela ary navadika ho NAD tamin'ny alàlan'ny làlan-tokana tsy mitovy amin'ny vitamina B3 (niacin, nikotinamide) hita ao amin'ny famenon-tsakafo vitamina.
Inona avy ireo voka-dratsin'ny niacinamide?
Tsy toy ny niacin, ny niacinamide dia tsy miteraka fikosehana. Na izany aza, ny niacinamide dia mety miteraka voka-dratsy kely toy ny aretin-kibo, gazy tsinay, fanina, maimaika, mangidihidy, ary olana hafa. Rehefa apetaka amin'ny hoditra ny crème niacinamide dia mety hiteraka may, mangidihidy na mena.
Inona no tsy azonao afangaro amin'ny niacinamide?
Aza mifangaro: Niacinamide sy vitamina C. Na dia samy anti-pémiant aza izy ireo, ny vitamina C dia singa iray izay tsy mifanaraka amin'ny niacinamide. "Ireo roa ireo dia antioksidanera mahazatra indrindra ampiasaina amin'ny vokatra skincare isan-karazany, saingy tsy tokony hampiasana mifanesy aorian'ny iray hafa", hoy ny Dr. Marchbein.
Afaka mampiasa niacinamide be loatra amin'ny tarehy ve ianao?
Rehefa ampiasaina amin'ny fifantohana avo be, ny niacinamide dia mety hiteraka fahasosorana amin'ny hoditra sy ny mena. Raha sendra olona vitsy an'isa tsy mahomby ianao izay misy fiatraikany ratsy amin'ny vokatra misy niacinamide, misy telo ny antony voalohany azo atao: tsy mahazaka aretina ianao, misy akora iray hafa miteraka fahasosorana, na mampiasa be loatra ianao.
Azo antoka ve ny niacinamide 1000 mg?
Mba hampihenana ny loza ateraky ny voka-dratsin'izany, ny olon-dehibe dia tokony hanalavitra ny fandraisana niacinamide amin'ny fatra mihoatra ny 35 mg isan'andro. Rehefa fatra mihoatra ny 3 grama isan'andro ny niacinamide dia raisina, dia mety hisy vokany lehibe hafa. Anisan'izany ny olan'ny aty na ny siramamy ao amin'ny ra avo.
Dotage klôroida Nicotinamide Riboside
Ny fandinihana dimy natao hatreto dia nametraka fa ny Nicotinamide Riboside dia azo antoka amin'ny fampiasana olombelona. Na izany aza, ireo fikarohana ireo dia nametraka ny fetra azo antoka Nicotinamide Riboside Chloridedosage ho an'ny olombelona eo anelanelan'ny 1,000 ka hatramin'ny 2,000 mg isan'andro. Na izany aza, tsy maintsy ao an-tsaina fa ny fanadihadiana rehetra izay nanadihady ny fiarovana ny Nicotinamide Riboside dia nanana habe kely dia kely ary noho izany dia mila fikarohana bebe kokoa amin'ity faritra ity.
Ny tanjona voalohany amin'ny Nicotinamide Riboside Chloride dia ny hanomezana tena Nicotinamide Riboside Chloride na Niagen ny vatana. Niagen na NR dia matetika misy amin'ny endrika roa: takelaka sy kapsula. Mpanamboatra famenon-tsakafo Nicotinamide Riboside maro no mitambatra NR miaraka amin'ny akora simika hafa, toy ny Pterostilbene. Na izany na tsy izany, mba tsy hampidi-doza, ny ankamaroan'ny mpanamboatra fanafody dia manome soso-kevitra ny hitazona ny fihinanana NR isan'andro eo anelanelan'ny 250 ka hatramin'ny 300 mg isan'andro.
Tombontsoa azo avy amin'ny kôlôdôla Nicotinamide Riboside
① Ny Nicotinamide Riboside Chloride dia manentana ny fahanterana
Ny NAD + tarihin'i Nicotinamide Riboside Chloride ao anaty vatana dia manetsona ireo enina manokana mifamatotra amin'ny fahanterana. Ny angovo iray toy izany dia ny sirtuins, izay nampifamatotra tamin'ny fiainana sy fanatsarana ny fiainana amin'ny ankapobeny. Ny fandalinana siantifika dia nanaporofo fa ny sirtuins dia manatsara ny kalitao sy ny halavan'ny fiainana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny ho ratra, ny fampitomboana ny tombony azo amin'ny famerana ny kaloria ary ny fanamboarana ny simba simba. Ny NAD + tarihin'i Nicotinamide Riboside Chloride dia manetsitra ny polimetim-bao koa izay fantatra amin'ny fanamboarana ny simba simba. Fanampin'izany, fandalinana siantifika maro no nampifandray ny asan'ny polymerases amin'ny fihinana fitomboana.
② Mampihena ny vintana ateraky ny aretim-po
Ny fahanterana koa dia mampitombo ny fahafahan'ny olona marary aretim-po. Rehefa mandroso taona ny olona, ​​mihalehibe sy mihombo ny lalan-drany, ka lasa mitombo ny tosidra. Rehefa mihombo ny tosidra ao anaty sambo dia mila miasa mafy indroa ny fo mba hantsaka ny ra, izay mitarika aretim-po isan-karazany. Ny NAD + nomen'i Nicotinamide Riboside Chloride dia mamadika ny fiovana mifandraika amin'ny taona ateraky ny lalan-dra. Misy porofo ara-tsiansa be dia be hanaporofoana fa ny Nicotinamide Adenine Dinucleotide na NAD + dia tsy mampihena ny hamafin'ny lalan-dra fotsiny fa mifehy ny tosidra systolika koa.
③ Nicotinamide Riboside Chloride Manome fiarovana amin'ny sela ihany koa
Ny Nicotinamide Riboside dia miaro ny selan'ny ati-doha. Ny fanadihadiana natao tamin'ny totozy dia nanambara fa ny famokarana NR nateraky ny NAD + dia nampitombo ny famokarana proteinina alpha PGC-1 hatramin'ny 50%. Ny proteinina alpha PGC-1 dia manampy amin'ny fiarovana ny sela ao amin'ny ati-doha amin'ny adin-tsaina oxidative ary koa manatsara ny fiasan'ny mitochondrial. Noho izany, ny fihinanana NR amin'ny olombelona dia miaro amin'ny aretin-tsaina ateraky ny taona, toy ny Alzheimer sy Parkinson. Ny fanadihadiana iray manokana dia nandinika ny vokatry ny haavo NAD + amin'ny olona mijaly amin'ny Parkinson. Ny fanadihadiana dia namintina fa ny NAD + dia nanatsara ny fiasan'ny mitochondrial amin'ny selam-bolo.
④ Tombontsoa hafa azo avy amin'ny Nicotinamide Riboside Chloride
Ankoatry ny tombony azo resahina etsy ambony dia misy tombontsoa fanampiny fanampiny mifandraika amin'i Nicotinamide Riboside Chloride.
Ny NR dia fantatrao hanatsarana ny tanjaky ny hozatra, ny fiasa ary ny fiaretana ary noho izany, ny fanjifana NR dia mifamatotra amin'ny fampandehanana atletika tsara kokoa.
Araka ny efa noresahina tetsy ambony, ny famokarana NR entin'ny NAD + dia manamboatra ny ADN simba ary manome fiarovana amin'ny adin-tsaina oxidative. Io kosa dia mampihena ny fahafahan'ny homamiadana voan'ny homamiadana.
Ny fandinihana iray dia namakafaka ny vokatry ny Nicotinamide Riboside amin'ny metabolism amin'ny totozy. Ny fandinihana natao dia nitombo ny metabolisma NR tamin'ny totozy. Na dia ilaina ihany aza ny porofo siantifika momba izany, maro ireo mpahay siansa mino fa i Nicotinamide Riboside dia misy fiantraikany mitovy amin'izany amin'ny olombelona ary noho izany dia tokony hanampy amin'ny fihenan'ny lanjany.
Aiza no hividianana vovo-dronono kôlôdidan'ny klôrozy Nicotinamide?
Ny fangatahana ny famatsiana Nicotinamide Riboside dia nitombo be tato anatin'ny taona vitsivitsy izay, satria ny tombony dia betsaka ny tombony entin'i Nicotinamide Riboside. Raha mitady hody any amin'ny tsenan'ny famatsiana Nicotinamide Riboside ianao, ny zavatra voalohany tsy maintsy ataonao dia ny tenanao fa mahatoky sy mahatoky ny mpamatsy. Aiza no mividy vovoka Nicotinamide Riboside Chloride amin'ny ankapobeny? Cofttek no valiny.
Cofttek dia mpamatsy kojakoja nipoitra izay nanomboka tamin'ny taona 2008 ary tao anatin'ny folo taona teo ho eo dia nanangana ny fisian'izany any amin'ny firenena maro ny orinasa. Hafa noho ny famokarana vokatra azo antoka, ny orinasa koa dia mifantoka amin'ny fandrosoana eo amin'ny sehatry ny bioteknolojia, ny teknolojia simika ary ny fizahana simika. Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny fikarohana kalitao ihany koa, izay manome azy ny lohany mihoatra ny mpamatsy hafa eo amin'ny tsena. Ny vovo-dronono Nicotinamide Riboside Chloride nomen'ny orinasa dia tonga amina andiany 25 kg ary azo itokisana amin'ny kalitao. Ankoatr'izay, ny orinasa dia manana ekipa mpanohana sy mpanjifa tena tsara izay hikarakara ny filanao rehetra sy ny fangatahanao amin'ny fotoana tena izy. Ity, raha te hividy vovoka Nicotinamide Riboside Chloride betsaka ianao, mifandraisa amin'i Cofttek.
Mpiara-manorina, mpitarika ny fitantanan-draharahan'ny orinasa; Nahazo PhD avy amin'ny Oniversite Fudan amin'ny simia biolojika. Mihoatra ny sivy taona ny traikefa amin'ny simia biolojika sy ny famolavolana zava-mahadomelina; taratasy fikarohana efa ho 10 navoaka tao amin'ny diariny manam-pahefana, miaraka amin'ny patanty sinoa mihoatra ny dimy.
(1).Conze, D., Brenner, C. & Kruger, fiarovana sy metabolisma CL an'ny fitantananana maharitra ny NIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) amin'ny fitsapana ara-pitsaboana tsy mitovina, Double-Blind, Placebo, olon'ny olon-dehibe matavy loatra. Sci Rep9, 9772 (2019)
(2).Carlijn ME Remie, Kay HM Roumans, Michiel PB Moonen, Niels J Connell, Bas Havekes, Julian Mevenkamp, ​​Lucas Lindeboom, Vera HW de Wit, Tineke van de Weijer, Suzanne ABM Aarts, Esther Lutgens, Bauke V Schomakers, Hyung L Elfrink, Rubén Zapata-Pérez, Riekelt H Houtkooper, Johan Auwerx, Joris Hoeks, Vera B Schrauwen-Hinderling, Esther Phielix, Patrick Schrauwen, Nicotinamide riboside supplementation dia manova ny fitambaran'ny vatana sy ny hozatra hozatra acetylcarnitine hozatra amin'ny taola-mahakivy, Ny gazety amerikana momba ny sakafo ara-pahasalamana, Boky 112, Laharana 2, 2020, pejy 413–426
(3) .Elhassan, YS, Kluckova, K., Fletcher, RS, Schmidt, MS, Garten, A., Doig, CL, Cartwright, DM, Oakey, L., Burley, CV, Jenkinson, N., Wilson, M., Lucas, S., Akerman, I., Seabright, A., Lai, YC, Tennant, DA, Nightingale, P., Wallis, GA, Manolopoulos, KN, Brenner, C.,… Lavery, GG (2019 ). Ny Nicotinamide Riboside dia mametaka ny hozatry ny taolam-paty NAD + metabolome ary mitarika sonia transcriptomika sy anti-inflammatoire. Tatitra momba ny sela, 28(7), 1717–1728.e6.
(4).Vovon-tsolika kôlôdôzôdeza Nicotinamide
(6).Oleoylethanolamide (oea) - ilay wand mahagaga amin'ny fiainanao.
(7).Anandamide vs cbd: iza no tsara kokoa amin'ny fahasalamanao? Izay rehetra tokony ho fantatrao momba azy ireo!
(8).Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny nikôtinamid riboside chloride.
(9).Palmitoylethanolamide (pea): tombony, fatra, fampiasana, famenony.
(10).Tombontsoa lehibe 6 ho an'ny fahasalamana amin'ny famenon-tsakafo resveratrol.
(11).Tombony 5 be indrindra amin'ny fihinanana phosphatidylserine (ps).
(12).Tombony 5 ambony amin'ny fihinanana quinone pyrroloquinoline (pqq).
(13).Ny famenon-tsakafo nootropic tsara indrindra an'ny alpha gpc.
(14).Ny famenon-tsakafo tsara indrindra ho an'ny monotucleotide nicotinamide (nmn).
Vao avy nianatra momba ny zava-mahadomelina ankehitriny aho mba hampihena ny fahanterana, ny zavatra nianarako hatreto dia ny 1. Nikotinamide riboside - ho an'ny NAD ambaratonga 2. MitoQ, C60oo, PQQ - Mitochondrial antioksidan 3. Quercetin - Senolitics 4. Carnosine - AGE breaker. Tsy azonao antoka raha mampihena ny fahanterany mihitsy izany, saingy manandrana izany ny olona.
Mikasika ny hoditro, ny fanampiana NR dia nahatonga azy io tsy ho maina kokoa, indrindra ny tongotro amin'ny fotoan'ny ririnina.
Ny NAD + dia miharatsy ao anaty rano ary raha vantany vao miakatra amin'ny hafanan'ny efitrano izy mandritra ny fotoana maharitra.
Amin'ny fotoana ahatongavany aminao dia efa nanjary ambany ny aotra noho izany antony izany no alehantsika mialoha toy ny NR sy NMN ary samy manentana ny NAD + ara-dalàna izy ireo.
Izay manapa-kevitra tianao haleha dia aza atomboka amin'ny 1g. Atombohy amin'ny fatra ambany ary jereo ny fahasalamanao.
Ny Nicotinamide Riboside mihitsy dia tsy marin-toerana.
Amin'ny fotoana ahatongavany aminao dia azo inoana fa ho simba amin'ny NAM ny ankamaroany.
Na izany aza saika ny entana rehetra azonao vidina dia ny NR Chloride, izay miorina tsara raha tsy mando (na eo aza ny nolazain'i Sinclair, azo porofoina amin'ny angona izany). Ny ampahany Chloride an'ny NR Chloride dia mpiorina fotsiny ary raha vantany vao mamoaka ranoka (toy ny vavoninao ny NR Chloride) dia tapaka ny ampahany Chloride ary mivoaka ny NR.
Ny NR dia mpialoha lalana ny NMN, ny NMN dia mpialoha lalana ny NAD +.
Ity korona nr nampt nmn nad sirt1 iray manontolo ity dia somary mampisafotofoto ahy fa amin'ny zavatra azoko angonina, dia novaina tamin'ny nampt tao anaty sela matavy sy ny sela beta kely ho lasa nmn, izay novain'ny enzimma hafa ho nad +, ary nad + nifandray tamin'ny sirt1 hiteraka tsindrona insuline.
Ny insulina dia singa iray mitombo ary mitondra siramamy ao anaty sela koa izy io, miteraka fisondrotana amin'ny angovo.
Niagen dia NR-CL, izay miorim-paka, manana fiainana talantalana lava, ary tsy mila vata fampangatsiahana. Heveriko fa tsy misy mivarotra NR madio.
Ny famenon-tsakafo 10-herinandro an'ny NR dia nandefitra tsara ary nitombo be ny NAD (+) ary ny metabolita mifandraika amin'ny ran'ny olon-dehibe miaraka amin'ny MCI. Ny NR dia nanatsara ny fMRI sy ny fiasa ara-batana, ny dingana voalohany sy faharoa vokariny. Na izany aza, ny fahasamihafana eo amin'ny fahalalana dia tsy tratra tamin'ity fandalinana piloto kely ity. Ny valiny dia manome porofo manohana amin'ny fanandramana bebe kokoa ny NR ho toy ny fomba hitazomana ny firafitry ny ati-doha sy ny fiasan'ny olon-dehibe efa zokiolona miaraka amin'ny MCI.
Novakiako tamin'ny fomba mazava ny lahatsoratra c ߋ mpletely momba ny fitovian'ny technoloɡies vaovao sy taloha, lahatsoratra mahatalanjona izany.
Vao 26 taona aho ary taorian'ny nanombohana NR / NAD + tamin'izaho 25 taona, dia manana ny heriko nataoko tamin'izaho 13 taona ary tsapako fa io taona io koa, ny fanaintainan'ny fampihetseham-batako dia sitrana ihany koa.
Tena misy zavatra ataony ary miaritra ny faharetako ka tsy maintsy miasa.
Cofttek hita tamin'ny taona 2008, dia haitao avo lenta ara-tsakafo Dieter Supplement amin'ny fampidirana ny famokarana, ny R&D ary ny varotra.
Ny fanampin-tsakafo tsara indrindra amin'ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Magnesium L-Threonate Famatsiana: Tombontsoa, ​​Fatra sy lafiny
Palmitoylethanolamide (PEA): Tombontsoa, ​​Dosage, fampiasana, fanampin-tsakafo
Ny famoahana Nootropic tsara indrindra amin'ny Alpha GPC amin'ny 2021
Andrefan'i Yucheng Station, Yucheng Town, distrikan'i Licheng, Luohe City, faritanin'i Henan any Sina
Disclaimer: Tsy manao fanambarana momba ny vokatra amidy amin'ity tranonkala ity izahay. Tsy misy fampahalalana omena an'ity tranonkala ity izay nohamarinin'ny FDA na MHRA. Izay fampahalalana omena ato amin'ity tranonkala ity dia omena araka ny fahalalantsika azy ary tsy natao hanolo ny torohevitry ny mpitsabo mahay iray. Ny fijoroana vavolombelona na ny vokatra momba ny vokatra nomen'ny mpanjifanay dia tsy fijerin'ny cofttek.com ary tsy tokony horaisina ho toy ny tolo-kevitra na zava-misy. Copyright © COFTTEK Inc.